Otu esi etinye Python 3.10 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
October 25, 2021 July 18, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Python 3.10 na APT Package Manager
Wụnye Python 3.10 na Ubuntu site na Isi Iyi
Maka ndị ọrụ yana ọkachasị ndị mmepe chọrọ ịnwale ntọhapụ ọhụrụ Python, na njedebe nke ntuziaka a, ị ga-ama Otu esi etinye Python 3.10 na Ubuntu 20.04 LTS.
Ịwụnye ụdị Python 3.10 kachasị ọhụrụ bụ usoro kwụ ọtọ na Ubuntu, ekele maka PPA omenala. Iji wụnye na ịnata mmelite na-aga n'ihu maka njirimara ọhụrụ, ndozi ahụhụ, yana mmelite nchekwa dị egwu, ị ga-agbakwunye ya (agwọ anwụ/ppa).
Ugbu a tinyegharịa Python 3.10; ị nwere ike ịtinye PPA kwụsiri ike ma ọ bụrụ na i wepụ ya. Ị nwere ike ịgbanwee n'etiti nsụgharị na-eme nke a. Agbanyeghị, a ga-adụ ọdụ ka ịmepụta gburugburu mebere ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ọtụtụ gburugburu.
Site na ndabara, PIP3.10 ekwesịrị itinye ya, nke bụ njikwa ngwugwu kacha eji maka Python.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Python 3.10 maka Ubuntu wee mepụta gburugburu mebere ngwa ngwa. N'ozuzu, Python 3.10 ka dị mma, yabụ ịrapara na Python 3.9 nwere ike bụrụ ihe na-achọsi ike maka oge a. Maka ndị chọrọ ịnwale Python ọhụrụ, 3.10 kwesịrị itinye ego iji wụnye.
November 2, 2021 3: 06 elekere
Nke ahụ bụ ihe m nwere ike ịkpọ onye nduzi kwesịrị ekwesị. Agbalịrị m tuts dị iche iche maka ịwụnye Python 3.10. Mana, pip3.10 anaghị arụ ọrụ n'ọnọdụ ọ bụla. Ma, mgbe usoro ndị a gasịrị, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Zaa Amartya Sinha
November 2, 2021 7: 09 elekere
Daalụ maka ozi Amartya, obi dị m ụtọ na ọ rụpụtara ya. 🙂